Uyifaka njani i-Emojis kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 332
I-tweets ligama lokupapashwa kwi-twitter. Ungabonisa izimvo, iindaba kunye nezinye izihloko ezininzi, kodwa kuphela ngo-280.
Phakathi kwabalinganiswa onokwabelana ngabo zii-emoji ezidumileyo. Olu luphawu lwedijithali oluboniswe njenge icon. Kukho amakhulu amawaka yoyilo lwe-emoji kwiwebhu. Uhlaziyo ngalunye lweenkqubo zokusebenza, zonke iintlobo zeemilo zenziwa ukuba zifumaneke kwii-emojis, ezinye ziyilo olukhethekileyo kwiqonga ngalinye.
Unokufumana kwakhona iipakeji ze-emojis ezikhutshelweyo zenethiwekhi zakho. I-Twitter ayikho ngaphandle koku, kumhleli wayo wokubhaliweyo uya kufumana iintlobo ngeentlobo ze-emojis. Ke unokwenza upapasho olunomdla nolonwabisayo kwiakhawunti yakho.
I-Etymology kunye nokufumaneka kwe-emojis
Imvelaphi yayo ikulwimi lwaseMpuma, ngakumbi ngesiJapan. Yenziwe ngamagama amabini ekubhaliweyo kwayo kwesiLatin kubhalwe "e" oko kuthetha ukuzoba kunye no "moji" okuthetha abalinganiswa ababhaliweyo. Indlela yokubiza yesiLatin yi "emóji"
Ukufumaneka kwayo kunwenwe ngokubanzi. Ngaphandle kwemvelaphi yayo esempuma, ukufakwa kwayo kwifomathi ye "Unicode" kuyenze yafumaneka kuninzi lweenkqubo zeSmartphone kunye nezisebenzayo. Njengakwi-WhatsApp, Messenger, Telegram kunye nezinye izicelo ezininzi apho ungabhala khona umbhalo.
Yenza i-tweet nge-emojis yakho oyithandayo.
Ukwenza i-tweet kunye ne-emjois yinkqubo elula kakhulu ukuyenza. Kodwa ukufumaneka kwayo kuyatshintsha ukusuka kuhlobo lwePC ukuya kuhlobo lweApp.KwiPC unokulandela le nkqubo ilandelayo:
Ngena kwi twitter
Yiya kwibhokisi yokubhala ye-tweet, ebekwe phezulu kwi-interface, ngaphezulu komda wexesha
Cofa kwibinzana "Kwenzekantoni?"
Uya kuqhubeka ukubhala i-tweet. Uyakwazi ukubona ezinye ii icon ezantsi kwebhokisi yokubhala. Ngokuhambisa isikhombisi okanye ucofe kwenye ukumila kobuso, uya kuba nakho ukubona zonke ii-emojis ezikhoyo kwi-tweet.
Unokuba neemodeli ezininzi kunye noyilo, olubekwe ngokwamaqela ahlukeneyo. Khetha eyona ilungele iimfuno zakho ze-tweet.
Uya kuqaphela ukuba kukho iithebhu ezininzi apho ii-emojis zihlelwe khona. Ungayifumana oyithandayo usebenzisa ibha yokukhangela.
Kwisicelo, ii-emojis azifumaneki kwisicelo esinobunzima, kodwa zezo Gcwalisa ingxelo.
I-Twitter iyila i-emojis yakho
Kwisakhelo sokuphucula imisebenzi ye-twitter, Iqonga lenze uphando olungacwangciswanga phakathi kwabasebenzisi ukuvavanya iiphakeji ezahlukeneyo ze-emoji ezinokukhethwa ngabasebenzisi.
Kolu phando, abasebenzisi babuzwa ithuba lokubandakanya ii-emojis ezibonisa "Andithandi" okanye uluvo olubi, ngaphandle kwesidingo sokufaka uluvo kwii-tweets. Ngolu phando, iqonga lifuna ukuphucula indlela ezinokuthi zenziwe ngayo izingxoxo kwi-Twitter.
Umzekelo obalulekileyo woku kukubandakanywa kwe-emoji "ecaphukisayo" ethi iFacebook inyuse amanqaku.
1 I-Etymology kunye nokufumaneka kwe-emojis
2 Yenza i-tweet nge-emojis yakho oyithandayo.
3 I-Twitter iyila i-emojis yakho